Xaqiiqda ka dambeysa mashruuc naqshadeynta - Creativos Online | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | Design Graphic, General
Marar badan, waxaa jira u janjeera in la habeeyo shaqada la xidhiidha garaafka iyo naqshadeynta websaydhka. In kasta oo aanu shaki ku jirin inay ka mid tahay xirfadaha inta badan qanciya heerka shaqsi ahaaneed, sidii la filaayey, haddana dhammaantood maaha kuwo ku habboon sidii ay dibadda uga muuqan lahayd. Aragga koowaad. Xaqiiqda mashruuca naqshadeynta badanaa way ka duwan tahay.
Qoraalkan waxaan uga hadli doonnaa xoogaa waxa ka dambeeya mashaariic badan naqshadaysan iyo / ama naqshadeynta websaydhka Maxaan heli karnaa markaan bilowno ka shaqeynta mashaariicda dhabta ah iyo macaamiisha.
Dhammaan waxyaabaha kor ku xusan waxay yiraahdeen, ma ula dhaqmeyno qodobkaan naqdinta naqshadeeye qadhaadh oo ka fog. Waxaan u maleynayaa in naqshadayaasha badankood, shaqada la helo oo la qabto lagu qaado xamaasad weyn. Tanina, had iyo jeer waa caqabad in laga faa'iideysto hal-abuurka xitaa qaybaha bixiya qol yar oo loogu talagalay hal-abuurnimada.
1 Mashruuc super abuur leh, oo aan sidaa u badnayn
2 Macaamiilku waa deg degay
3 Sax, sax ah oo ka saxsan
4 Macaamilku wuxuu u haystaa inuu yahay naqshadeeye
5 Naqshad qurux badan oo wax ku ool ah
Mashruuc super abuur leh, oo aan sidaa u badnayn
Macaamilku diyaar uma ahan inuu sameeyo nashqad cusub oo hal abuur badan. Tani waa marka go'aannadaadu ay ku xaddidan yihiin rayiga macaamiisha. Intaas waxaa sii dheer, xadidaadahan waxaa inta badan u nisbeeya macmiil fikrad xirfadeed yar leh. Wixii intaas ka badan niyad-. In yarna waa kuwa ku dhiiran fikradan. Tan waxaa u sabab ah dhowr arrimood:
Macaamilku ma haysto lacag ku filan oo uu ku maalgashado. Ganacsi yar ayaa ku qasbanaan doona inuu isku koobo siyaabo badan. Laakiin maahan kaliya ganacsi yar inuu adiga ku xadido. Shirkad weyn ayaa u baahan tiro nuqullo ah. Marka laga hadlayo kaararka ganacsiga, shirkaduhu waa inay sifiican u arkaan sida ay uguqalmayaan inay kubixiyaan lacagtaas
Waa shirkad leh muuqaal shirkadeed oo aad loo qeexay mana rabaan inay ka baxaan qadka horay loo abuuray. Ugu badnaan, samee dib u soo kabasho, laakiin wax kale oo yar, maaddaama maareeyayaasha sare ee shirkadda, inta badan caado, ay aad u diidan yihiin inay beddelaan sawirka.
Aragti ahaan waxay noqonkartaa mid aad uxiiso badan laakiin marka ay timaado waqtiga qabashada nashqad qaab muuqaal ah.
Macaamiilku waa deg degay
Qodobkani waa mid fudud, mashaariicdu marar dhif ah maaha. Dhammaanteen waxaan jeclaan lahayn inaan ka shaqeyno jawi xasilloon oo aan deg-deg lahayn, oo hal-abuurku u socdo, u lugee socod kaynta si aad ugu milicsato mashruuca iyo kuwa kale, laakiin runta ayaa ah in macaamiisha sida caadiga ah ay weydiistaan ​​waqtiyo aad u adag. Sida iska cad waa inaan "difaacnaa" shaqadeena oo aan gaarnaa ugu yaraan heshiis, maadaama hadday wax waliba si fiican u socdaan, aan horumarin doono intaas oo keliya, laakiin mashaariic badan waana inaan helno waqti aan ku horumarinno mid walba oo ka mid ah.
Sax, sax ah oo ka saxsan
Markay heerkan gaadho waxay noqon kartaa mid aan dhammaad lahayn. Naqshadeeye ahaan waa inaad sameysid ugu dambeyn wareega sixitaanka macmiilka. Ugu badnaan laba sixitaan ayaa sax noqon lahaa. Dabcan, haddii uu yahay mashruuc ballaaran, labadan oo keliya kuma filnaan doonaan.
Suuragal ma ahan in la qorsheeyo lana diyaariyo degel kaliya 2/3 wareeg oo saxitaan ah. Ujeeddadu waa in macmiilku ka farxiyo oo haddii aan ku shaqeyno qiimo macquul ah, annaga oo aan bixin shaqadeenna, taasi waxay keenaysaa baahiyo dhanka macmiilka ah, oo ay tahay inaan u hoggaansano ugu yaraan intii suurtagal ah. Tan waxaa ka mid ah sameynta wareegyo sixitaan ah, qaar badan.
Caadi ahaan, markasta oo ay sii weynaato shirkadda aan u shaqeyno, ayaa sii kordheysa tirada wareegyada sixitaanka, maaddaama wadaxaajoodyadu ay ka sii dhib badan yihiin.
Laakiin wada xaajoodyada oo dhami ma aha sidanXaqiiqdii waxaad heli doontaa qof shaqadaada aad loogu qiimeeyo. Xaaladdan oo kale, hubaal waxaad ku shaqeyn doontaa xamaasad iyo naxariis aan la soo koobi karin oo xagga macmiilka ah.
Macaamilku wuxuu u haystaa inuu yahay naqshadeeye
In yar oo xidhiidh la leh kii hore, sidoo kale waa iska caadi in la helo macaamiil "gacmahooda saaraya" naqshadeynta sidii oo ay naqshadeeye gudaha u foorarsadeen. Kuwani waxay kuu soo jeedinayaan inaad ku beddesho naqshadda sidaad doontid iyo haddii ay dhacdo xaaladdii ugu xumeyd waxay kugu qasbi doonaan inaad sidaa sameyso. Haa, waad diidi kartaa oo waad muran geli kartaa, laakiin waxa ugu fudud ayaa noqon doona markii aad isku daydo inaad ka dhaadhiciso in fikraddoodu aysan fiicnayn, waxaad horay u sii riixaysaa waxay codsadeen.
Naqshad qurux badan oo wax ku ool ah
Naqshad si gaar ah u qurux badan ayaan waxtar lahayn haddii aysan macno samaynayn. Ha noqoto astaan, bog internet ama buugga, naqshadeynta waa inay buuxisaa shuruudaha qaarkood.
Tani waxay badiyaa goyn kartaa baalasha qaybteenna ugu hal-abuurka badan sida naqshadeeyayaasha garaafka, laakiin runtu waxay tahay inay caadi tahay in laga shaqeeyo shirkadaha bixiya wax soo saar ama adeeg mararka qaar gaabin kara hal-abuurnimada. Dhammaanteen waxaan ku riyoonnaa inaan ka shaqeyno mashaariic aan ku horumarin karno dhinacayada ugu hal-abuurka badan, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in kuwani ay aad u yar yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Xaqiiqda ka dambeysa mashruuc naqshadeynta ah